Indawo yokugcina impahla kaLola - I-Airbnb
Indawo yokugcina impahla kaLola
Indlu encinane lolwandle kumgca wokuqala kunye iimbono kuphela ye-Ria de Pontevedra. Ezithuleyo kakhulu apho Bayawacima izikhephe baphuma intlanzi apho cwaka yaye ulwandle luya kwenza ukuhlala amava ekhethekileyo. Ngaphandle Indlu ineendawo zegadi ezi-3 apho sinokufumana indawo yephuli kunye nendawo yebarbecue enemibono engakholelekiyo.Ngaphakathi inegumbi lokulala elikhulu kwindawo ephezulu apho unokubona ulwandle.
Indlu yaselwandle eneembono zolwandle kumgca wokuqala kunye nendawo ekufutshane nazo zonke iindawo ezinomdla kwiRias Baixas.
Umgama nje weemitha ezingama-20 sinendlela yolwandle edibanisa nedolophu yaseCombarro, esinokufikelela kuyo ngeenyawo.Sahlulwe ngemizuzu nje eli-15 ukusuka eSanxenxo, engama-20 ukusuka eVigo nama-40 ukusuka eSantiago de Compostela.
Campelo idolophu encinci yemvelaphi yaselwandle, ejikelezwe yi-shellfish,
kunye neendlela ezintle, iimbono ezibalaseleyo zesiqithi saseTambo, iilwandle ezincinci, kunye nesinyathelo esisuka kwiPaseo de Lourido apho sineendawo zokutyela ezilungileyo kunye nemivalo yolwandle.